Ọkachamara Semalt: Ihe dị mkpa nke ịkọ akụkọ Scam
Spam bụ nchegbu kachasị emetụta ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ịntanetị. N'ọtụtụ ọnọdụ, isi scams na-eme na enyemaka nke ndị isi scammers. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ndị mmadụ na-enwe ọtụtụ nsogbu na mgbagwoju anya mgbe a na-alụ ọgụ.
Ivan Konovalov, Semalt Onye ahịa na-aga nke ọma, na-echetara na ọ dị ezigbo mkpa ka onye ọ bụla kwuo akụkọ ojoo ozugbo. Dị ka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịkpọ 0300 123 20400 iji kọọ akụkọ aghụghọ ma ọ bụ ojoro - grain temperature trends. Mkpesa ojoo na - enyere aka na National Fraud Intelligence Bureau na nchọpụta nakwa dịka usoro nhazi ndị ọzọ bara uru. Ozugbo ị na - akọ akụkọ ikpe, ị ga - ahụ nke ọma na nzọụkwụ ọzọ, nke ga - agbaso nchegbu gị. N'ọtụtụ ọnọdụ, akụkọ ndị a na-eduga na ntinye akwụkwọ ndị na-eme nyocha. N'ọnọdụ ndị ọzọ, nkwupụta ndị a nwere ike ọ gaghị eduga nyocha.
Ịkọ akụkọ ọjọọ na Royal Mail
Ihe ka ọtụtụ n'ime ihe gbasara ọnyà na-eme na mmemme nke ndị na-agba ọsọ. Ọtụtụ ọrụ ntanetị nwere ikpo okwu nke na-enye ohere ka ndị ọrụ jiri akara ụfọdụ ozi dị ka spam. O di nkpa iji ozo na-egbochi spam, karịsịa na onye na-enye email. Maka ndị ọrụ ozi mail na-eje ozi, onye ọ bụla nwere ike ịkọ spam na nsogbu ndị ọzọ metụtara ya na Mailpost Scams, PO Box 797, Exeter EX1 9UN. Ọ dịkwa mkpa ka ị mara ndị ahịa gị. Cheta na nchekwa nke ebe nrụọrụ weebụ gị na nke ndị ọbịa gị dị n'aka gị. Ụlọ ọrụ email ndị ọzọ ebe ị nwere ike ịkọ akụkọ ojoo gụnyere 0345 611 3413 nakwa scam.mail@royalmail..com.
Oku oku ebido
N'ọnọdụ ụfọdụ, ịnwere ike ịkọ akụkọ gbasara spam ozugbo site na oku ekwentị. Na nke a, ị nwere ike ịkpọtụrụ ekwentị-Pay Services Authority (PSA). Ọ dị mkpa ịmara na ọrụ a abụghị ụgwọ na-efu na ebubo na ebubo gị ugbu a. Ị nwekwara ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ PSA iji kọọ akụkọ ndị a ma ọ bụ ọbụna kpọọ nọmba ọnụ ọgụgụ 0300 303 0020.
Kwụsị email scam
Otu n'ime ihe ndị dị mkpa ị ga-eme iji hụ spam na-akọ ya. E nwere ọtụtụ ebe ị nwere ike ịkọ spam. Nke mbụ, ọ dị mkpa ka ịdebanye ozi ịntanetị dị ka spam ozugbo ị natara ha. Nke a na-eziga ozi na onye na-eweta email gị iji zipu ozi site na ngalaba ahụ ma ọ bụ adreesị. Nzọụkwụ ọzọ nwere ike ịgụnye ime ihe ndị dị n'elu. Ndị ọrụ nwekwara ike ijikwa ụfọdụ n'ime okwu ndị a gụnyere gụnyere nọmba ndị uweojii ebe ị nwere ike ịkọ akụkọ ozugbo. Ọ dịkwa mkpa ka ị mata ụfọdụ n'ime mwakpo ojoro ahụ, nke nwere ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ na-ata ahụhụ dị ukwuu.
Ọ dị mkpa ịkọ akụkọ ojoo ahụ yana ọrụ ndị ọzọ na-akwadoghị internet. Ọtụtụ ndị na-ata ahụhụ dị ukwuu na ebe nrụọrụ weebụ ha na-azụ ahịa site na spam. N'ihi ya, ọ dị mkpa ka ị debe onwe gị ka gị na ndị dị ugbu a na ụzọ isi mee ihe spam. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ịnwere ike ịkọ spam ozugbo na ndị isi dị mkpa. Nke a nwere ike ime ka ụfọdụ ụzọ kachasị mfe iji nyere aka ịchịkwa ọnọdụ spam. Ụfọdụ n'ime ebe ị nwere ike ịkọ spam nọ na ntụziaka a. Ha dị mkpa, ha nwere ike ịmebe ọwa maka ịme ihe n'ịntanetị.